Zithini iimarike zekamva? | Ezezimali
Ngokuqiniseka okukhulu ukuba ngamanye amaxesha uya kuba uvile ngeemarike zekamva kwaye usenokuhendeka ukuba wenze utyalomali ngesi sixhobo. Nangona kunjalo, mhlawumbi ukungazi ngale mveliso yemali kukwenze warhoxa ekwenzeni imisebenzi leyo ezahluke kakhulu Zithini izinto ezithengwayo kunye nokuthengiswa kwezabelo kwimarike yemasheya? Ke ukusukela ngoku akukho nto ibhetele izakwenzeka kuwe ngaphandle kokwazi ukuba yeyiphi le modeli yotyalo-mali.
Ewe, iimarike zekamva ngokusisiseko luphuhliso lweekhontrakthi zokuthenga okanye ukuthengisa izinto ezithile kumhla wexesha elizayo. Apho kufikelelwe kwisivumelwano kunye nexabiso langoku, ubungakanani kunye nexabiso umhla wokuphela. Okwangoku iyafumaneka kwiimarike zesitokhwe, kodwa ungalibali ukuba inokuchaphazela inxenye elungileyo yeeasethi zemali ezilawulwa kwiimarike zezabelo. Njengenye indlela ekufuneka uyenzile yokonga ukusukela ngoku.
Iimarike zexesha elizayo ziyafana nokuthenga kunye nokuthengisa izitokhwe kwimarike yemasheya, kodwa ayizizo izinto ezifanayo. Ukuba ufuna ukutyala imali ngale mveliso ikhethekileyo yemali, kuya kufuneka uyazi ngaphezulu kwezinye izinto ukuba zidwelisiwe ngamaxesha apho Iimarike zamasheya zivaliwe. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukusebenzisa ithuba iintshukumo ezenzeka ngelinye ixesha losuku xa ungakwazi ukwenza imisebenzi yakho kwintengiso eguquguqukayo. Ngale ndlela, unokuxhamla kupapasho lweengxelo, izifundo okanye ezinye izixhobo zohlalutyo ezipapashiweyo notshintshiselwano luvaliwe.
1 Imarike yexesha elizayo: imvelaphi
2 Utyalomali olusekwe kwingqikelelo
3 Intengiso entsha yekamva
4 Ukudalwa kwezalathiso ezintsha
5 Ngomnxeba kwaye ubeke izikhundla
6 Kwiiprofayili ezithile
Imarike yexesha elizayo: imvelaphi
Olu didi lweemarike zezemali lwalunemvelaphi yalo ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX kwaye njengomthombo ekubhekiswa kuwo izinto ezibonakalayo. Phakathi kwezo zazime ngaphezu kwayo yonke ikofu, ingqolowa, ioyile kunye neembotyi zesoya, phakathi kwezinye zezona zibalulekileyo. Akumangalisi ukuba ithathwa njengemveliso enxibelelene kakhulu nolu didi lweeasethi zezemali, ngenxa yoko yinxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba ababandakanywanga kwiipotifoliyo zabo zotyalo-mali.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa nanini na ukuba iyimarike ebonakaliswa ngamaxesha oxinzelelo lonikezelo (lokuvuna) nangamaxabiso ahluka-hlukeneyo unyaka wonke, nto leyo eyenze ukuba umsebenzi ungathandeki kangako. Le nyani yenza ukuba kube yinto eqhelekileyo kubo ukuba badweliswe kwiimarike zekamva kuninzi lwehlabathi. Apho ungayenza ibe nengeniso ngokusekwe kukhetho onalo ngalo lonke ixesha kwaye ngokungathi ngamaxabiso esitokhwe esitokhwe.
Utyalomali olusekwe kwingqikelelo
Olu didi lweemarike zezemali lubonakaliswa licandelo lazo eliphezulu lokuthelekelela, apho kukho imali eninzi onokuyifumana kwimisebenzi eyenziweyo. Nangona kukushiyela ii-euro ezininzi oko ukushiya apha endleleni ngenxa yeempawu ezikhethekileyo zale asethi yemali ekhethekileyo kwindawo enkulu yabatyali mali. Kwelinye icala, ezi ziimarike eziphantsi kokwahluka kwamaxabiso aphezulu kwaye ngenxa yoko, abatyali mali bathatha umngcipheko ngethemba lokufumana izibonelelo ezizayo. Njengomahluko ophambili ngokubhekisele kwimisebenzi yemarike yemveli.
Enye into ekufuneka uyithathele ingqalelo kolu hlobo lwentengiso yemasheya kukuba awukho kwimeko yokwenza imisebenzi yezolimo kuphela kodwa nakwimpahla yezezimali, izimbiwa, iimali, njl. Kwaye enye into engafanelekanga ukuba ingabonwa ukusukela ngoku. Ayikho enye into ngaphandle kokuba ukupheliswa akufuneki ukuba kwenziwe kwinqanaba lokuvuthwa, kodwa ukuba le ntshukumo sele iyinto encinci phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngayiphi na imeko, lutyalo-mali oluntsokothileyo kunolunye kwaye lubonakaliswe ngakumbi kwizinto ekuthiwa zivela kwimveliso. Apho umngcipheko uphezulu kakhulu kunakwabanye.
Intengiso entsha yekamva
Ngayiphi na imeko, iindaba ezimnandi zomdla wakho zivela kwinto yokuba kuvuleka amathuba amatsha otyalo-mali kule mveliso ukusukela ngoku. Kuba ngoku, ukusukela kunyaka ophelileyo, kunokwenzeka ukuba usebenze kwikamva lemali kuba iMarike esemthethweni yoKhetho kunye neKamva leMali eSpain (MEFF) izakusungula ikontrakthi yexesha elizayo kwizemali phantsi kwegama Ikamva leFX eliQengqelekayo.
I-MEFF yimarike ehleliweyo elawulwayo, elawulwayo kunye nolawulo lweKhomishini kaZwelonke yoThengiso lwezoThengiso (CNMV) kunye noMphathiswa wezoQoqosho lwaseSpain apho kuthengiswa khona izinto ezahlukileyo zemali. Apho kudityaniswa iindidi ezahlukeneyo zekamva apho unokuvula khona izikhundla ukwenza imali yakho ibe yinzuzo nangaliphi na ixesha. Ngokusetyenziswa kweekhomishini ezifanayo kakhulu nezo ziveliswe ekuthengweni nasekuthengisweni kwezabelo kwimarike yemasheya.
Ukudalwa kwezalathiso ezintsha
Ukusukela kunyaka ophelileyo, i-BME iqale ukusasaza, ngababoneleli abaphambili beenkcukacha zemakethi yesitokhwe, ii-indices zokungazinzi kunye nezicwangciso kunye ukhetho kwi-Ibex 35. Ezi zalathiso, eziza kupapashwa ekupheleni kweseshoni nganye, zenza ukuba kube nokwenzeka ukulinganisa ukungazinzi kweemarike kunye nokubonisa ukusebenza kwezicwangciso ezithile zotyalo-mali ngeemveliso ezithengiswa kwi-MEFF, kwimakethi yeemveliso zeBME. Njengethuba elitsha lokutyala imali kwisicwangciso esahlukileyo kunye neemodeli owawusebenza kude kube ngoku. Ezi zezinye zezona zinto zibalulekileyo onazo.
Isalathiso VIBEX Isalathiso se kuthetha ukungazinzi kwintengiso yaseSpain. Ilinganisa ukungazinzi okuchaziweyo ekukhethweni kwesalathiso somvuzo oguqukayo, i-Ibex 35 ukukhula kweentsuku ezingama-30.
Isalathiso IBEX 35 SKEW ibonisa indaleko ukungazinzi skew kukhetho lwe-IBEX 35. I-skew yokuguquguquka ichazwa njengomahluko wokungazinzi kwexabiso ngalinye lokuzilolonga. Ngophawu olucingelwayo kunye nomngcipheko omkhulu kwimisebenzi eyenziwa ngabatyali mali.
Ngomnxeba kwaye ubeke izikhundla
Isalathiso IBEX 35 THENGA Iphindaphinda indawo yokuthenga kwixa elizayo ye-IBEX 35 kunye nokuthengiswa rhoqo kokukhethwa kweefowuni, ke ngoko, sisicwangciso esifanayo ekuthengeni Ibhasikiti ye-IBEX 35 ngengeniso eyongezelelweyo evela kwintengiso yokhetho.
Isalathiso IBEX 35 BHALA Iphinda intengiso eqhubekayo ye- Beka ukhetho. Isicwangciso esiliqili kunye nenzuzo enomda kwi-premium efakiweyo kunye nelahleko engenamda.
Isalathiso IBEX 35 UKHUSELEKO Iphindaphinda indawo yokuthenga kwixa elizayo ye-IBEX 35 enxulunyaniswa nokuthengwa rhoqo kweenketho ze-Put. Isicwangciso esiliqili esineelahleko ezinqongopheleyo kunye nenzuzo engenamda, elingana ne Ukuthenga umnxeba. Iziphatha kakuhle ngokuhamba ngesiquphe kwesalathiso, kukuziphatha okungalunganga ngokuhamba ngokutyibilikayo. Okanye lilize, ukuba bhetyebhetye kwayo yenye yeempawu zayo ezichaziweyo kuso nasiphi na isicwangciso sotyalo mali.
Isalathiso IBEX 35 UKUthengiswa kwe-STRANGLE Iphindaphinda intengiso eqhubekayo yokubeka kunye nokukhetha umnxeba. Iyahambelana nesicwangciso esingathathi hlangothi (esinganyusi okanye esine-bearish) lindela ukungazinzi okuphantsi kwaye eso sibonelelo silinganiselwe kwipremiyamu efakiweyo. Ngenxa yokuba ukusebenza kwayo kuphawulwe kukungazinzi, sisalathiso esinolungelelwaniso olusezantsi kakhulu kunye ne-IBEX 35®, yiyo loo nto inyusa ukwahluka kwepotifoliyo.
Nayiphi na kwezi kubhejwa kwiimarike ze-equity sele inokwenziwa ngaphandle kweengxaki ezigqithileyo ezivela kwibhanki eqhelekileyo. Njengenye yeendlela ezintle eziye zavela kwiinyanga ezidlulileyo ezinokuthi zisetyenziselwe ukwahlula naluphi na uhlobo lotyalo-mali. Nangona igcinelwe iprofayile ye- Umtyalomali otyhafisayo kwaye unolwazi olukhulu ngeemarike zezemali. Ukuba ibingeyiyo le nto, bekungangcono ukuba ungayeki kule misebenzi kuba ungaphulukana nemali eninzi kuhambo ngalunye olwenziweyo.
Kwelinye icala, ngokusasazwa kwezi zixhobo zintsha, kuluhlu olubanzi lwezicwangciso zotyalo-mali kunye nolwazi oluthe kratya, uya kuba neendlela ezininzi zokusebenzisa ukungazinzi kweemarike. Ngokukodwa kunyaka onje ngoku apho ukungaqiniseki okuveliswe yimarike yemasheya Inkulu kunakuqala kwaye kunganyanzelekanga ukuba utshintshe imveliso yakho yezemali ukwenza ukuba iiasethi zakho zenzuzo kwiinyanga ezilishumi elinambini ezizayo okanye ngexesha lokuhlala elide.
Elinye lamagalelo alo aphambili lilele kwinto yokuba ukusukela ngoku uya kuba neenketho ezininzi zokutyala imali. Ngaphandle kokuzikhawulela ekuthengeni nasekuthengiseni izabelo kwiimarike zesitokhwe. Ukuze ukwazi ukukhetha phakathi kwezicwangciso ezahlukeneyo zotyalo-mali, ukusuka kwinto esekwe kukungazinzisi ukuya kwezo zibonelelwe kwizinto ezahlukeneyo zoluhlu ezidweliswe kwiimarike zezemali. Ngokusebenzisa imodeli yotyalo mali ethengisa nanini na emini, nokuba kunjani ebusuku nangeempelaveki. Ukuze imarike yemasheya ayisiyiyo kuphela isindululo sotyalo mali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Zithini iimarike zekamva?